मोटरसाइकल लियो ३२ वर्षिय सोमनाथको ज्या’न ! – ताजा समाचार
मोटरसाइकल लियो ३२ वर्षिय सोमनाथको ज्या’न !
अर्घाखाँची : मोटरसाईकल दु’र्घटनामा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । दुर्घ’टनामा अर्घाखाँचीक‍ो सन्धिखर्क ९ अर्घाका ३२ वर्षिय सोमनाथ पौडेलको रूपन्देहीको सालझन्डीमा ज्या’न गएको हो। अर्घाखाँची घर भई रूपन्देहीको बुटवल बे’लबासमा बस्दै आएका पौडेलले चलाएको लु २० प ९३२३ नम्बरको मोटरसाइकल रो’किराखेको ना ६ ख ६१०२ नम्बरको ट्रकमा ठो’क्किएर दु’र्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकल पश्चिमबाट पुर्व तर्फ जाँदै गरेको थियो। दुर्घ’टनामा परि ग’म्भीर घा’ईते भएका पौडेलको अञ्चल अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा मंगलबार मृ’त्यु भएको सालझन्डी प्रहरीले जनाएको छ।
घ’टना बारे थ’प अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हिउँमा पु’रिएर बुधबार एक युवकको ज्या’न गएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण–११ स्थित देउराली बे’स क्या’म्पनजिक बगरमा युवक हिउँको चट्टान फु’टेर पुरिँदा १ जनाको ज्या’न जा’नुका साथै २ जना घा’इते भएका हुन्। ज्या’न गु’माउनेमा पोखरा–५स्थित पस्र्याङ बस्ने १८ वर्षीय सञ्जय खनाल रहेका छन्। यस्तै घा’इते भ’एकाहरुमा पोखरा–११ बस्ने २० वर्षीय सन्तोष बाँस्तोला र पोखरा–५ बस्ने १८ वर्षीय निरञ्जन कोइराला रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
हिउँको च’ट्टान फु’टेर पु’रिएपछि दुई जनाको उ’द्धार गरी पोखरा ल्या’ई पोखरा म’णिपाल अस्पतालमा भ’र्ना गरिएको ग’ण्डकी प्रहरी प्र’देशको का’र्यालय पोखराले जनाएको छ ।प्रहरीका अनुसार दु’वैको अ’वस्था अहिले सा’मान्य छ। तीन पोखरेली युवक उ’क्त क्षे’त्रमा घुम्न’का लागि गएका थिए । घ’टनास्थलमा घा’न्द्रुकबाट प्रहरी टो’ली ख’टाइएको छ । त्यस्तै चाबहिलस्थित मूल सडकमै घर भ’त्किउँने क्र’ममा घा’इते भएका एकजनाको मृ’त्यु भएको छ। महनागरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका डिएसपी प्रदिपकुमार सिंहका अनुसार घा’इतेमध्ये २६ वर्षीय दीपक तामाङको मृत्यु’ भएको हो।
तामाङको मित्रपार्कस्थित दी’र्घायु अस्पतालमा उपचारका क्र’ममा मृ’त्यु भएको हो। उनको टाउँकोमा ग’म्भीर चो’ट ला’गेको थियो।घर भ’त्काउने क्र’ममा घा’इते भएका मध्ये दुईजना घर फ’र्किसकेका छन् भने अ’र्का एक घा’इतेको उपचार भइराखेको छ। मृ’तक तामाङ सोही घर भ’त्काउन ख’टेका म’जदुर हुन्।बुधबार दिउँसो घर भ’त्काउने क्र’ममा घरले पु’रिएर उनी ग’म्भीर घा’इते भएका थिए। त्यस्तै राजधानीको तारकेश्वरमा एक विद्यालयको छा’नो ख’स्दा ३९ जना विद्यार्थी घा’इते भएका छन । प्राप्त जानकारी अनुसार तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुरमा रहेको तारकेश्वर विद्याकुञ्ज इंग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको ट्रसले छाएको छा’नो ख’स्दा विद्यार्थी घा’इते भएका हुन् ।
घा’इते प्रा’थमिक त’हमा अध्य’यनरत विद्यार्थी घा’इते भएको र उनीहरुको वि’भिन्न अस्पतालमा उ’पचार भइरहेको बताइएको छ ।घा’इतेमध्ये ४ जना ग’म्भिर घा’इते भएका छन् ।विद्यालयमा फुटबल प्र’तियोगिता च’लिरहेका बे’लामा विद्यालयको बा’रदलीमा बसेर हेरिरहेका विद्यार्थी सहित बा’रदली ख’सेको बताइएको छ ।तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुरमा रहेको तारकेश्वर विद्याकुञ्ज इंग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको ट्रसले छाएको छानो ख’स्दा घा’इते भएका विद्यार्थीहरुको स्था’निय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।